करोडपति छोरा कानून उपन्यास अध्याय ० - - ० 3218 मा
जुन 21, 2021 जुन 20, 2021 by हिसम उल्लाह
याकूबको आँखा उठ्यो र उनले उत्साहित हुँदै भन्यो: “हो! Elaine! तपाईले भन्नुभयो कि मेरो पुरानो अनुहार महँगो Moutai पिउन लायक छैन, त्यसोभए तपाईको पुरानो अनुहार सयौं हजारको लायक स्किनकेयर उत्पादनहरूको योग्य छ? नबिर्सनुहोस्, हामी एक जोडी छौं! ”
"यदि तपाईं जोडीको लागि आधा बिरालो हुनुहुन्छ भने, यदि म, याकूब, गधा हो भने, तपाईं एलेन ऊँटको खच्चर हुनुहुन्छ, जो अरूभन्दा उत्तम छ?"
इलेन एकदम अपमानित महसुस गर्छिन्, र क्रोधमा कराईन्, "Fkuk आफ्नी आमाको पुरानो खच्चर! जस्तो तपाईको पनि आफ्नो वृद्ध महिला संग तुलना गर्न लायक छ? आफ्नो पुरानो अनुहार हेर्नुहोस्, पाकेको कद्दू जस्तो झink्गी झुम्काएको जस्तो देखिन्छ, मेरी आमा कोमल, सेतो र चिल्लो पनि देखिन्छ? तपाईं अझै पनि अनुहार हुनुहुन्छ भन्न मलाई तपाईं आधा catty हुनुहुन्छ?
याकूब रिसाए, चार्लीले रिसाएर हेरे, र स्पष्टै चिच्याए: “हेर, मैले भनें कि तपाईंले उनलाई कति महँगो स्काइनकेयर उत्पादनहरू व्यर्थै दिनुहुन्छ। स्किनकेयर उत्पादनहरू कुकुरको अनुहारमा राख्न यसलाई राम्रो हुन्छ।
"तपाईंले मेरो कुरा पहिलो स्थानमा सुन्नु पर्दछ, र भर्खरै उसलाई नक्कली दिनुभयो, जे भए पनि, उनले आफ्नो पुरानो टोपीमा यो देख्न सक्दिनन्!"
जब याकूबले यो कुरा भने, उनले तुरुन्त पछुताए।
ऊ केवल उत्साहित थियो र केहि समयको लागि ब्लर्ट भयो, र तब उनले महसुस गरे कि उनले सींगको गुँडमा वार गरे।
यकिन छ, जब इलेनले यो सुने, उनीले आफैंले यसलाई समातेर हात ताने, र श्रापित,
“याकूब, तिमी बा t टार्ड, मेरो ज्वाइँले मलाई केहि दिनुभयो। यदि तपाईं दिनुहुन्न, यो ठीक छ। यसको बारेमा नराम्रो धारणा बनाउनुहोस्, हेर्नुहोस् यदि मैले तपाईंको पुरानो अनुहार खोतल्दिन भने! ”
क्लेयरले आशा गरेनन् कि उनीहरूले कुरा गरिरहेको बेला ती दुई जनाले यसलाई च्यात्नेछन् र हतार गरेर बीचमा रोक्न अगाडि बढे, र असहाय भई भनेः
"ओह, बुबा! आमा! तपाईलाई कहिले समस्या हुने छ? यो नबिर्सनुहोस् कि आज चार्लीको जन्मदिन हो! तपाईं दुबैलाई खुशीको दिनमा यहाँ समस्या भइरहेको छ। के यो जानाजानी ब्लक मा जोडिएको छैन? "
चार्लीले यस समयमा यसो पनि भन्यो: “आमा, बुबाले त्यस्तो कठोर नहुनुहोस्। तपाईं सबै एक परिवार हुनुहुन्छ। दिनभरि यो सानो घटनाको कारण समस्या नपरोस। ”
“तपाईले हामीलाई भन्नुभएको छ कि हाम्रो दिनलाई राम्रोसँग हेर्नु हाम्रो निम्ति राम्रो हो, तर तपाई दुईको सम्बन्ध झन् झन् नराम्रो हुँदै गइरहेको छ। यदि यो कुरा हो भने, मलाई लाग्छ कि हामी केवल अघिल्लो जीर्णयुक्त घरमा फर्कनुपर्दछ, र परिवार अझ सामंजस्यपूर्ण हुन सक्छ! "
चार्लीले यसो भनेको बित्तिकै इलेनले तुरुन्तै सबै कार्यहरू रोकी र बाहिर ब्लर्ट भयो, “होइन! राम्रो बुहारी, हैन! हामी केहि पनि भन्न सक्दछौं यदि हामी पुरानो घरमा जानुपर्दछ। तपाईं ठूलो ठट्टा गर्न सक्नुहुन्छ। यो ... "
चार्लीले आफ्नो टाउको निस्सहाय भई हप्कायो र भन्यो, "यस अवस्थामा कृपया बुबासँग हाम्रो कडा मिहिनेत खुशीको जीवनको कदर गर्नुहोस् र झगडा गर्न बन्द गर्नुहोस्।"
"ल!" इलेनले कुनै हिचकिचाहट नगरी भने: “कुनै समस्या छैन! पक्कै कुनै समस्या छैन! आमाले तपाईंलाई सुन्नुहुन्छ, यो बुढो कुकुरलाई जस्तो होइन! ”
याकूबले उनको मुख घुमायो, केवल पल्टिनै लागेको थियो, एलेनले उसलाई हेर्यो, र उसले तुरुन्तै चासोको साथ आफ्नो मुख बन्द गर्यो।
वास्तवमा, इलेनको अगाडि, ऊसँग कुनै गम्भीर लडाई प्रभावकारिता थिएन।
यदि एलेन दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान नाजी जर्मनीको फलामको धार थियो भने याकूब सबैभन्दा उत्तम पोल्याण्ड हुन्थ्यो। इलेनको फलामको खुरमुनि, ऊ केहि राउण्डमा बाँच्न सक्षम हुनेछैन।
त्यसकारण, एक पुरानो कुकुर इलेनले गाली गरेको पछि उसले विवेकी भई आफ्नो मुख बन्द गर्न छनौट गर्यो र झगडा अन्त्य भयो।
दुबै अन्तमा रोकिरहेको देखेर, चार्ली पल्टियो र लिफ्टलाई तहखाने तलामा लग्यो।
भण्डारन कोठाबाट उसले दुई बोतल मोताई र दुई बोतल रातो दाखमद्य निकाले।
चार्लीको तिब्बती वाइन, चाहे यो सेतो वाइन हो वा रातो, एक धेरै शीर्ष ब्राण्ड हो, मुख्यतया उनीहरूले यसलाई चिनियाँ नयाँ वर्षको समयमा प्राप्त गर्‍यो, र उनीहरूले यसलाई धेरै पिएनन।
याकूबले वास्तवमा लामो, लामो समयको लागि यिनीहरूलाई लोभ गरेको थियो, तर यी मद्यको प्रत्येक बोतल एक सय हजारभन्दा बढीको थियो र इलेनले भनिन् कि उनले उनलाई केही पिउन दिइनन्।
उहाँलाई गुप्तमा पिउनबाट जोगाउन, उनले यी वाइनहरूका लागि ईन्भेन्टरी पनि बनाई, र प्रत्येक तीनदेखि पाँच दिनमा जाँच गर्छिन्। जेकब चिन्तित थिए, तर उनी जहिले पनि दोषी थिए।
जब चार्ली रक्सी लिएर फर्किए, याकूबले रक्सी उत्सुकताका साथ लिए र सावधानीपूर्वक मद्य खोले। सॉस-सुगन्धित वाइन गन्ध बहियो। याकूबले लामो सास फेर्न सकेन,
"यो मद्य सबै भन्दा राम्रो वाइन हो!" केही पटकको गन्धले मलाई उठाउँछु जस्तो लाग्छ म उठ्न लागिरहेको छु।
इलेनले उनलाई सेतो लुक दिए र उत्तेजित गरे: "% 75% एन्टिसेप्टिक मदिरा अझ उच्च गन्ध आउँछ, यदि तपाईं मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, यसलाई प्रयास गर्नुहोस्!"
"तपाईंलाई के थाहा छ?" याकूब गनगन भयो र तुरुन्तै चार्ली र उनीको लागि दाखमद्य राख्नको निम्ति कचौरा उठायो।
इलेनलाई यो पनि थाहा थियो कि याकूबको बारेमा धेरै कुरा गर्नाले वातावरण पनि नष्ट हुन्छ, त्यसैले उनले कुनै कुराकानी गरेनन, तर रातो दाखमद्य चार्लीको हातबाट लिए र यसलाई वाइनको कागको साथ खोल्न अग्रसर गरे।
चार जनाको परिवारले रक्सीले भरिएको थियो, क्लेरले केक निकाले र चार्लीलाई भने: “ए पति, तिमीले पहिले मैनबत्तीहरू फुकाउँछौ र खाना बनाउँछौ, त्यसपछि खाऊ!”
चार्ली मुस्कुराइन् र हाँस्यो। यो जन्मदिनको लागि मानक प्रक्रिया हो। यो दिउँसो जस्तो छ र यो अझै राती जस्तै छ।
त्यसकारण, जब क्लेयरले फ्रिजबाट केक निकाले र मैनबत्तीहरू जलाए, चार्लीले इच्छा बनाउन तयार गर्‍यो र मैनबत्तीहरू फुकाल्‍यो।
छेउमा क्लेयरले पनि उसको लागि जन्मदिनको शुभकामना गायो। उनको आवाज चर्को थिएन, तर ऊ धेरै कोमल थियो। ठूला आँखाहरूसहित, उनी बाहिर गइरहेकी थिइन: "तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना, तपाईंलाई जन्मदिनको शुभकामना……"
चार्लीले क्लेयरको गायनमा उनको इच्छालाई आत्मसात गर्‍यो र मैनबत्तीहरू बाहिर उडायो।
पछि क्लेयरले भने: “मेरो श्रीमान्, तिम्रो आँखा बन्द गर, मँ तिम्रो लागि एउटा उपहार छु।”
चार्ली हिलायो र हल्का आफ्नो आँखा बन्द।
क्लेयरले पछाडिबाट एउटा गिफ्ट बक्स निकाली, दुबै हातमा समात्दै, चार्लीको हातमा राखी, र मुस्कुराउँदै भन्यो: "ठीक छ, आफ्नो आँखा खोल!"
चार्लीले तल हेरी, र उनको हातमा के थियो वाचक बक्समा परिणत भयो।
बक्समा अक्षरहरूको एक सरल रेखा लेखिएको थियो, चार्लीले एक झलकमा पहिचान गर्यो, यो पाटेक फिलिप भयो।
उनले क्लेयरलाई अचम्मित हेरे र भने: “पत्नी, तपाईंले मलाई किन यति महँगो उपहार किन किन्नुभयो?”
क्लेयरले लाजका साथ जवाफ दिए: "यो महँगो छैन, यसलाई खोल्नुहोस् र यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ भने हेर्नुहोस्!"
चार्लीले होज्यो र प्याकेज खोल्यो, जुन भित्र चुपचाप प्याटेक फिलिप नटिलस वाच थियो।
यस समयमा क्लेयरले नम्र भई भने: “पाटेक फिलिपको यो नउटिलसलाई प्रवेश-स्तर शैली मानिन्छ।”
चार्लीले हतार गर्दै भन्यो: "मेरी असल पत्नी, नटीलसको मूल्य कम्तिमा पनि पचास लाख बढेको छ, हैन?"
क्लेयर मुस्कुराउँदै भनिन्, "यो कसरी हुन सक्छ? पुरुषहरू समय नहेर्ने घडी लगाउँछन्। यो मुख्यतया एक प्रकारको स्वभाव हो। आजकल, धेरै होशियार भएका पुरुषहरूको धेरै घडी हुन्छन्, बिभिन्न अवसरहरूमा उपस्थित हुन्छन् र बिभिन्न कपडाहरू मिलाउँदछन्। "
जब चार्लीले यो सुने, उसले अलिकति उत्तेजित महसुस गर्न सकेन। उनले मुस्कुराए र भने, "धन्यवाद, पत्नी! मेरी श्रीमती सबैभन्दा विचारशील हुनुहुन्छ। ”
छेउमा रहेको इलेनले जिब्रोलाई स्तब्ध पारेर यसो भन्दै सुने: “हे भगवान्, यस्तो यस्तो घडीको लागि मात्र करिब a० लाख खर्च हुन्छ, के त्यो राम्रो देखिन्छ?
क्लेयरले खुसीसाथ भने: “आमा, यो क्लासिक मोडेल हो। यो चीनमा महँगो मात्र हो, तर यो विश्वभर एकै हो। ”
इलेनले उनको मुटु छुन् र भनिन्, "यो BMW कार हो जुन कलाईमा लगाईन्छ!"
क्लेले मुस्कुराइ र भनिन्, "यदि तपाईंले यस्तो भन्नु भयो भने, अझै पनि तपाईंको नाडीमा विलासिता विला छ।"
चार्लीले गम्भीरतापूर्वक यसो भनि: “मेरी श्रीमती। तपाईंले भर्खर हेर्नुभयो, त्यसैले भविष्यमा फेरि नकिन्नुहोस्। ”
क्लेयर मुस्कुराइ र भनिन्, "कि भविष्यमा किन्ने कि नगर्ने मेरो मुडमा निर्भर गर्दछ र म पैसा कमाउन सक्छु कि हुँदैन। जे भए पनि, तपाईको राय गणना छैन। "
चार्लीले मुस्कुराउँदै भनिन्: "ठीक छ, म तिमीलाई सुन्नेछु।"
क्लेयरले सन्तुष्टिका साथ भने: "यो पनि त्यस्तै हो!"
बोल्ने काम सिध्याएपछि उनले तुरुन्तै घडी हेरी र चार्लीलाई भनिन्‌: “म तपाईंलाई यो लगाउनमा मद्दत गर्नेछु। अब देखि तपाई प्रत्येक दिन यसलाई लगाउन कोशिस गर्नुहुनेछ। केही दिनको लागि यो लगाउनु हुँदैन र यसलाई छाड्नुहोस्। ”
चार्ली मुस्कुराइन् र भनिन्, "मेरी श्रीमतीले मलाई दिनुभयो, अवश्य पनि मैले यो हरेक दिन लगाउनु पर्छ!"
क्लेयरले शिर झुकाए र आफ्नो नाडीमा घडी हेरेर उनले यस्तो उद्गार व्यक्त गरे: “यो राम्रो देखिन्छ! यो कम कुञ्जी र अर्थपूर्ण छ। "
२ विचारहरु "करोडपति छोरा इन कानून उपन्यास अध्याय - - - ”०" मा
जुआन कार्लोस एस्कोबार
जुलाई 27, 2021 मा 4: 52 पीएम
ब्यूनस días.los siguientes capítulos no abren 3323-24। 3327 28२-3335-२36 3339 40-XNUMX-XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX--XNUMX० Alguien pudiera subirlos de nuevo।
जुन 21, 2021 मा 5: 11 AM
जुन 21, 2021 मा 12: 11 AM
म्यू बुएनो पेरो क्वेड एन सस्पेंसो डिसेप्स डे 3219 क्यापिटलस
25,091 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्